पत्रकारितामा भाषाको बहशः ‘तिमी’ कि ‘तपाईँ’ ? - Jhilko
पत्रकारितामा भाषाको बहशः ‘तिमी’ कि ‘तपाईँ’ ?
यतिबेला नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा एउटा बहस सुरु भएको छ । त्यो बहस हो समाचारमा कसैलाई सम्बोधन गर्दा तँ, तिमी, तपाई, हजूर, मौसुफ के प्रयोग गर्ने ?
समाचारमा समाजका कुन तह, तप्का र ओहदाका मानिसलाई कस्तो भाषा प्रयोग गरेर सम्बोधन गर्ने भन्ने कुनै निश्चित नियम छैन । बरु बिभिन्न समाचार संस्था र समाचार एजेन्सीले आफ्नो शैली पुस्थितका ‘स्टाइल बुक’ तयार पारेका हुन्छन् जस अनुसार ती संस्थाबाट सम्प्रेषण भएका समाचार पठाक, दर्शक तथा श्रोताबीच पुग्ने गर्छ ।
पत्रकारितामा सकेसम्म समाजका हरेक वर्ग, तह, तप्का र ओहदाका व्यक्तिहरुलाई सामान आदरार्थि शव्द प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ । किनकि पत्रकार सन्देश सम्बाहक मात्र हो त्यस बाहेक ऊ केही होइन । कसैमाथि भाषिक विभेद गर्ने अधिकार पत्रकारलाई छैन । ऊ कानून भन्दा माथि पनि छैन । कार्यपालिक, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्ने कार्यको उसले निगरानी र पहरेदारी गर्नुपर्छ तर सही वा गलत, न्याय वा अन्याय त्यसको अन्तिम फैसला गर्ने काम भने पत्रकारको होइन ।
त्यसैले कुनैपनि समाचार संस्थामा आवद्ध पत्रकारले प्रयोग गर्ने भाषामा समानता भने हुनै पर्छ । उच्च ओहदामा पुगेको व्यक्तिलाई उच्च आदरार्थी, तल्लो ओहदा र कुनै पनि ओहदामा नरहेको व्यक्तिलाई तल्लो स्तरको सम्बोधन गर्ने काम पत्रकार र पत्रकारिता भाषामा हुनुहुदैन ।
के हो भाषा ?
मानव मानवबीच भावना वा विचार सम्वेदना गर्ने माध्यम भाषा हो । भाषा यस्तो साधन हो जसको माध्यमले हामी आफ्नो विचारहरूलाई व्यक्त गर्छौं र विचार ब्यक्त गर्नलाई जुन पारिभाषित ध्वनिहरुको उपयोग गर्छौं ती सबै मिलेर एउटा सम्पूर्ण भाषाको उत्पत्ति हुन्छ ।
प्रायः भाषालाई लिखित रुपमा व्यक्त गर्नका लागि लिपिहरुको सहायता लिनु पर्छ । भाषा र लिपि, भाव व्यक्तिकरणका लागि दुई विभिन्न माध्यम हुन् । कुनै एउटा भाषालाई कयौँ लिपिहरुमा लेख्न सकिन्छ, र दुई वा त्यो भन्दा बढी भाषाहरुलाई एउटै लिपिमा पनि लेख्न सकिन्छ ।
भाषा आधारभूत सञ्चार माध्यम हो । छापा र विद्युतीय भन्ने प्राविधिक वर्गीकरण मात्र हो । चाहे लेखियोस् वा बोलियोस्, सञ्चारको वास्तविक माध्यम त भाषा नै हो ।
पत्रकारिता भाषा सिधा, सरल र सहज हुनुपर्छ । पत्रकारिता भाषाको मूल उद्देश्य भाषाज्ञानको प्रदर्शन गर्ने नभई खबर, सूचना वा सन्देश धेरै भन्दा धेरै मानिसको कान वा आँखासम्म पु¥याउने नै हो । यसकारण पत्रकारिता र साहित्यको भाषा फरक फरक हुन्छ । त्यहि भएर पत्रकारितालाई हतारको साहित्य पनि भन्ने गरिन्छ । समाचार हतारमा लेखिने साहित्य भएकाले यसमा भाषिक त्रुटि हुन सक्छन् । पत्रकारिताको मूल उद्देश्य त छोटो समयमा धेरै भन्दा धेरै सूचना र सन्देश प्रवाह गर्ने हो न कि साहित्यको जस्तो कल्पना ! हतारमा लेखिने पत्रकारिता भाषामा भाषिक र व्याकरणीक सुद्धासुद्धी सतप्रतिशत गर्न सकियो भने त त्यो झन ‘सुन माथि सुगन्ध’ नै भैहाल्यो ।
यसरी उठ्यो बहस:
भाषाको बारेमा ठूलो बहस जारी छ । भाषा जोगाउन र एकरुपता ल्याउन सरकारले भाषा आयोग नै गठन गरेको छ । भाषामा प्रयोग भइरहेका आयातित शव्दहरुले मौलिकता नै लोप हुने हो कि भन्नेमा भाषाविद्हरु चिन्तित छन् । नेपाली भाषामा ठेटपना हराउँदै गएको र हाइब्रिड भाषाले पत्रकारितामा मान्यता पाउँदै गएको छ । वर्तमान नेपाली साहित्यमा पनि आख्यानकारहरुले प्रयोग गर्ने भाषा पनि उरन्ठेउलो, उत्ताउलो हुँदै गएको छ ।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजधानीमा आयोजित प्रज्ञा प्रतिष्ठनको एक कार्यक्रममा पत्रकारहरुले समाचारमा सबैलाई ‘तिमी’ भनेर सम्बोधन गरेको भन्दै उनीहरुले आफ्ना बा-आमालाई पनि तिमी नै भन्छन् होला भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिए । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिका बारेमा पत्रकारिता क्षेत्रमा निकै छलफल, बहश भयो र यो बहस अझै टुंगिएको छैन ।
पत्रकारिता क्षेत्रका अग्रज, बिद्वानहरु, तथा आमसञ्चार तथा पत्रकारिताका केही प्राध्यापकहरुले समेत यस बारेमा बिभिन्न सञ्चारमाध्यमा यसबारे विचारविमर्श गरेका छन् । केहीले तर्क गरेका छन्– राज्यका प्रमुख पाँच ओहदामा बस्ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखका समाचारमा 'तपाईँ भन्ने आदरार्थी शव्दको प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ । केही बिद्वानहरु भन्छन्, पत्रकारको आँखामा सबै समान भएकाले सबैलाई कि ‘तिमी’, कि ‘तपाईँ’ सम्बोधन गर्नुपर्छ । केही अग्रज पत्रकारहरु देशको २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनमा पत्रकारले पनि तोकतन्त्र र समानताका लागि धेरै ठूलो योगदान गरेका हुनाले कसैलाई ‘तिमी’ र कसैलाई ‘तपाई’, ‘हजूर’ र ‘मौसूफ’ प्रयोग गर्न नहुने तर्क गर्छन् ।
तर नेपालका चारवटा सरकारी संस्थाहरु रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, रासस, र गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरुले भने सबैलाई समान आदरार्थी शव्द ‘तपाईँ’ प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।
त्यसो तः नेपाली मिडियाको नियमक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि समाचारमा ‘तिमी’ वा ‘तपाईँ’ के प्रयोग गर्ने भन्ने ठोस नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्नका लागि कुनै पनि सञ्चारमामध्यमलाई निर्देशन दिएको छैन । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति र प्रेस काउन्सिलले आपसरी छलफलमा निर्माण गर्ने पत्रकार आचारसंहितामा पनि समाचारमा के कस्तो आदरार्थी भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने ठोस रुपमा उल्लेख भएको पाईँदैन ।
हरेक सामाजिक विज्ञानमा शैद्धान्तिक कुरा जे जस्तो भए पनि व्यवहारिक पाटा र पक्ष भने फरक हुन्छन् । शिद्धान्तले मात्रै व्यवहार चल्दैन । व्यवहारमा समाजका मूल्य, मान्यता, रिती, थिती, सामाजिक धारणा र मनोविज्ञानको पनि अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ । हरेक ‘सोसल साइन्स’को सिद्धान्तको पछाडी ‘नर्मेटिभ साइन्स’ पनि रहेको हुन्छ ।
त्यसैले यदि देशका पाँच प्रमुख ओहदामा बसेका व्यक्तित्वहरुलाई ‘तपाई’ भन्ने आदरार्थि शव्द प्रयोग गर्ने र बाँकीलाई ‘तिमी’ भन्ने हो भने यसले पनि समस्या निम्त्याउन सक्छ । एउटै कार्यक्रममा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरु उपस्तिथ भए र उनीहरु सबैले मन्तव्य राखे भने पत्रकारले एउटै समाचारमा कसैलाई ‘तिमी’ र कसैलाई ‘तपाईँ भनि सम्बोधन गर्न मिल्छ ? समाचारमा पत्रकारले यस्तो भाषिक विभेद गर्यो भने त झन जग हँसाई हुन्छ, पत्रकारिता भाँडमा जान्छ ।
त्यसैले पत्रकारिता भाषमा ‘तिमी’ र ‘तपाईँ मध्ये के प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नु त ठिकै हो तर त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार भने सम्बम्न्धित पत्रकार वा सञ्चारगृहमै दिँदा वेश होला । पत्रकारितामा देखिएका यी र यस्ता अन्य ‘इस्यू’लाई परिपक्व हुनका लागि र ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्नका लागि यस्ता बहस र छलफल भने पर्याप्त रुपमा हुन जरुरी छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
नेपालको अपरिपक्व कूूटनीति
काँचो जुनार टिप्दै किसानः ७० प्रतिशत उत्पादन घट्यो
अमेरिकामा दुई जनाको हत्या आरोपीलाई मृत्युदण्ड
जर्जिया जेल अधिकारीहरुका अनुसार बिहीबार स्थानीय समय अनुसार साँझ ९.३८ बजे ५२ वर्षिय...
सह–सचिव पदका राजेन्द्र काफ्लेको ढाका टोपीप्रति किन रिस...
उनले उक्त स्ट्याटस पोष्ट गरेपछि केहीले टोपी सुहाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने केहीले...
यि हुन् पुरुष सरह काम गर्ने महिलाहरु